Garoowe:-Dowllad Puntland ayaa eedeyn kulul u soo jeedisay Madaxweynihii hore ee Puntland Gen.Cade Muuse Xirsi Boqor waxayna ku eedeysay in uu qalaale siyasadeed iyo nabadgelyo xumo ka wado deegaanada Puntland warmurtiyeedka ka soo baxay maanta Madaxtooyada Puntland ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey Wasiirka warfaafinta Puntland EN. Maxamuud Caydiid .
Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid ayaa ku eedeeyey Madaxweynihii hore ee Puntland Gen. Cadde Muuse Xirsi in uu masuul ka yahay qabsashadii magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool iyo dagaaladii ka dhacay deegaanka Mijiyahan kaas oo sababay in kooxo ka tirsan Al-Shabaab ay galaan Buuraleyda Golis.
Warsaxaafadeedka dowlada Puntland ayaa waxaa kale oo ay ku eedeysay Gen.Cadde Muuse Xirsi in uu wado gadood ciidan iyo jidgooyo dhawaan ka dhacay meelo ka mid ah gobollada Bari iyo Karkaar waxayna dowllada Puntland ugu baaqaday Gen.Cadde Muuse in uu ka joogo amni xumada uu ka wado Puntland waxayna masuuliyada iyo cawaaqib xumada ka dhalata arrimahaas uu dusha u ridan doono Gen.Cadde Muuse iyo siyaasiyiinta la fikirka ah.
Dowllada Puntland ayaa sidoo kale ku eedeysay Gen.Cadde Muuse Xirsi in uu xagal daacinayo Maamul Gobolleedka JubbaLand ee dhawaan laga dhisay magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubadda Hoose waxaana madaxweyne loogu doortay Axmed Maxamed Islaan Ahmed Madoobe.
Ilaa hadda weli kama hadal Eedeynta ay Puntlland u jeedisay Madaxweynahii hore ee Puntlland Gen Cadde Muuse Hirsi xili uu Gen Cadde Muuse uu ku sugan yahay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar oo ay hadda ka socdaan shirar ay maalmihii u danbeeyey ay yeelanayaan odayaasha dhaqanka.